devmac [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/a/a64841afa3559181e04d4a21f598dfff.xhtml failed
Resaka developpement amin'ny mac
Mizara roa ny OS Apple: MacOS sy MacOSX.
Ny MacOSX dia refonte totale-na OS, misy base unix (darwin) araka ny nolazaina teo, misy api vaovao: Carbon sy Cocoa izay nanampiana ny api Classic. Ankoatra an’izay dia misy ny Quartz izay miandraikitra ny affichage (izay ny Aqua no endrika isehoany), ny QuickTime miandraikitra ny multimedia, ary ny OpenGL. No-integrer-na tao anatin’ny MacOSX koa ny API Java sy JVM.
- Raha hanao dev ho an’ny MacOS (9 noho midina) izany dia ny API Classic no ampiasaina. Ny Carbon koa dia natao mba hahafahana mitondra ny appli MacOS taloha handeha amin’ny MacOSX. Noho izany ny Carbon dia afaka anaovana appli mandeha amin’ireo karazana OS 2 ireo. Azo atao koa ny mametraka Java amin’ny MacOS dia Java no anaovana dev. Ny langage ampiasana an’ireo Classic sy Carbon ireo dia ny C++.
Ankoatra izay dia misy ny AppleScript. Io angamba no langage mora ianarana indrindra. Io indray dia ahafahana mi-piloter ny MacOS sy ny application mipetraka aminy. Misy ny atao hoe dictionary ny logiciel tsirairay izay manome ny api-ny koa ho afaka ampiasaina amin’ny applescript.
- Raha hanao dev ho an’ny MacOSX indray, dia mandeha daholo aloha ireo. Ny Classic dia mihodina amin’ilay sous-systeme MacOS 9 ao anatiny. Ny Carbon indray dia misabaka. Fa misy fanampiny anankiroa: ny Cocoa sy ny Java. Ny Cocoa dia azo programmer-na amin’ny langage C++, Objective-C, Java ary AppleScript. Ny applescript miaraka amin’ny MacOSX koa dia lasa tsy fitaovana fanaovana script-na automatisation-na tache fotsiny intsony, fa fitaovana fanaovana dev-na application mihitsy. Afaka mifangaro daholo ireo langage rehetra ireo arakaraka izay ilaina: azo atao ny mampiasa classe Java amin’ny Applescript, na mampiasa applescript anaty fonction C++, sns ...
Ho an’ny macosx koa izany mazava ho azy dia afaka mampiasa shellscript unix hanaovana karazan-javatra sasany. Ireo appli opensource no mety mitodika any kokoa.
Ho an’ireo zavatra rehetra ireo, dia misy ny Developper tools sy ny xcode izay misy IDE ho an’ireo langages sy API ireo.
- Raha hanao dev Java:
Tsy haiko ny API amin’ilay java atao amin’ny MacOS 9 noho midina. Fa amin’ny MacOSX dia mila mitandrina ihany, raha ohatra ka kendrena ho afaka hihodina amina plateforme hafa noho ny MacOSX ilay appli, satria misy Classe bediabe mifangaro ao ny API Sun sy API MacOSX.
Efa misy IDE Java ny Xcode sy ireo rindrankajin’ny Developper Tools, fa azo atao tsara koa ny mampiasa Eclipse.
devmac.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43